မမကွီးတှအေသဲစှဲ – MM Republic
ဆိုငျကယျပျေါမှဆငျးပွီး အိမျခွံဝနျးထဲကို လှုပျလီလှုပျလဲ့လြှောကျဝငျသှားသော ဒျေါနီနီမွငျ့၏အိုးကွီးကို ကွညျ့၍ ထူးကြျောစိတျထဲက ကောငျးကောငျးကွီး ပွဈမှားနမေိသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့သညျ သူဆိုငျကယျကယျရီဆှဲလာသညျ့ သကျတမျးတဈလြှောကျ စိတျဝငျစားစရာ အကောငျးဆုံးဟု ဆိုရမညျဖွဈသညျ့ အမြိုးသမီးကွီးတဈယောကျဖွဈသညျ။ သူမ အသကျအားဖွငျ့ ၄၅ နှဈဝနျးကငျြခနျ့ ရှိပွီ။ ထူးကြျောထကျ အသကျ ထကျဝကျနီးပါးလောကျ ကှာသညျ။ အဒျေါအရှယျ အနျတီကွီးအရှယျသာဖွဈသညျ။ ထူးကြျောက အသကျသုံးဆယျပငျ မပွညျ့သေးပါ။ ဒျေါနီနီမွငျ့က လငျမရှိသညျ့ မုဆိုးမတဈယောကျဖွဈပွီး သမီးနှဈယောကျအမလေညျးဖွဈသညျ။ သမီးတှကေ အိမျထောငျရကျသား ကကြုနျကွပွီး အဝေးမှာ သှားရောကျ၍ မိသားစုအလိုကျ အလုပျလုပျကိုငျနကွေသညျ။ သူမအနားမှာ ဘယျသူမှမရှိပါ။ အခြိနျမရှေး ဆှဲစားလို့ရသညျဆိုတာ သခြောပါသညျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဆိုငျကယျ ကယျရီသမားမြားစှာအထဲကမှ ထူးကြျောဆိုငျကယျကိုသာ အမွဲတစေ ရှေးစီးတတျသညျ့ သူမကို ထူးကြျောကိုယျတိုငျပငျ သတိထားမိလာခွငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈလသေညျ။ထူးကြျောမှာလညျး ဒီလို မိနျးမကွီးတှေ အပီကိုငျခဲ့သညျ့အတှအေ့ကွုံတှရှေိပါသညျ။ အခြို့မိနျးမတှဆေိုလြှငျ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ဟိုငျးဝေးခရီးသှားရငျး လမျးတဈဝကျမှာပငျ အလုပျဖွဈခဲ့ကွတာမြိုးလညျး ကွုံတှရေ့တတျပါသညျ။ သူကတော့ဘယျသောအခါမှ လကျနှေးခဲ့ခွငျးလညျး မရှိပေ။ ဘယျယောကျြား ဘယျမိနျးမ မဆို လီးနှငျ့စောကျဖုတျ လိုးခွငျးတညျးဟူသော အတှအေ့ရသာမှာ သာယာတတျသူတှဖွေဈကွပွီး ဆုံဆညျးမှုမှနျသမြှသညျလညျး ထိုနရောမှာပငျ လမျးဆုံးလရှေိ့တတျကွတာကို သူသိထားပွီးဖွဈသညျ။ ဆိုငျကယျကိုပွနျကှလေ့ာခဲ့ပွီးမှ သူမပိုကျဆံအိတျနှငျ့ဘုရားတငျဖို့ ဝယျယူလာခဲ့သော မမွေို့ပနျးတဈစညျးက သူ့ဆိုငျကယျ အရှခွေ့ငျးထဲမှာကနျြနတောကို သတိထားလိုကျမိပွီး ထူးကြျော သူ့ငမွှထေိုးဆိုငျကယျကို သူမအိမျဖကျဆီ ပွနျကှလေ့ာလိုကျသညျ။
ဆိုငျကယျစကျသတျကာ ဒေါကျထောကျပွီး အိမျဝငျးထဲကို အသာလြှောကျဝငျလာခဲ့သညျ။ “အနျတီမွငျ့ … အနျတီမွငျ့ ” နှဈကွိမျတိတိချေါလိုကျပွီး ပွနျထူးသံမကွားရ၍ ထူးကြျောလညျး စထေ့ားသော ဘာဂြာတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ပွီး အိမျရှခေ့နျးကို လှမျးဝငျလာခဲ့ပါသညျ။ အိမျထဲရောကျနပွေီဖွဈ၍ အျောချေါလညျးကွားမညျဟု ယူဆပွီး … “အနျတီမွငျ့ ကြှနျတျောပါ ထူးကြျောပါ ” ဒျေါနီနီမွငျ့ အိမျနောကျခနျးထဲက ထှကျလာသညျ။ “အျော မောငျထူးကြျော ပွော ဘာမြားလဲလို့ ” “ဒီမှာလေ အနျတီ့ပိုကျဆံအိတျနဲ့ ပနျးစညျးကနျြနလေို့ လာပွနျပေးတာပါ” “အိုးး ဟုတျသားပဲ ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ သားရေ မငျးမပွောရငျ အနျတီတောငျ သတိရဦးမှာမဟုတျဘူး ဟငျး ဟငျး ဟငျး လာ လာ အိမျထဲမှာ ခဏထိုငျ တဈခုခုသောကျပါဦး ” ထူးကြျောလကျကာပွလိုကျကာ ဟနျကိုယျ့ဖို့ဆိုတဲ့အမူအယာနှငျ့ … “နပေါစေ ဒုက်ခရှာလို့ အနျတီရယျ ” “အို ဒုက်ခရှာတာတော့ ဘယျဟုတျမှာလဲ သားရဲ့ မငျးကိုကြေးဇူးတငျလှနျးလို့ ကြေးဇူးဆပျရတာပေါ့ တခွားသူ တဈယောကျယောကျသာဆို မငျး ခုပွနျပေးသလို လာပွီးပေးခငျြမှ ပေးမှာပေါ့ မဟုတျဘူးလား အနျတီလညျးဒီနေ့ ခရီးတဈခုသှားစရာရှိလို့ဆိုပွီး အိတျထဲမှာ ငှငေါးသိနျးလောကျထညျ့ထားမိတာ ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ မောငျကြျောထူး အဲ မောငျထူး ကြျော ရယျ “”
“ရပါတယျ အနျတီရယျ ကြှနျတျောက အဲဒီလိုမြိုး မလုပျတတျပါဘူး အနျတီရဲ့ ဟငျးဟငျး ” “အေးပါကှယျ အနျတီနားလညျပါတယျ ခဏနျော အနျတီအဝတျအစားလဲလိုကျဦးမယျ ပွီးမှ အအေးအတူ သောကျကွတာပေါ့ မငျးလညျး ဆိုငျကယျတဈခြိနျလုံး ပတျမောငျးရတာနဲ့ မောနပွေီ အမောပွေ ကလေးတော့ လုပျသှားပါ ” သူမနောကျဆုံးစကားဖွဈသော အမောပွကေလေးတော့ လုပျသှားပါ ဆိုတဲ့စကားကွောငျ့ ထူးကြျောစိတျထဲက ရယျခငျြပကျကြိဖွဈသှားရသလို ပုဆိုးအောကျက ညီတျောမောငျပငျ ထောငျးကနဲ ခေါငျးထောငျထခငျြသလိုလို ဖွဈသှားရလသေညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့အကြ င်္ီအဝတျအစားလဲပွီး အိမျနဝေတျစုံဖွငျ့ပငျ အခနျးထဲကနေ ပွနျထှကျလာသညျ။ ဘာအခုအခံမြှ ပါမညျမထငျသညျ့ ဘလောကျဈလကျပွတျပါးလှပျလှပျကလေးက သူမ၏ထှားထှားအိအိရှိလှသညျ့ ရငျသားဆိုငျကွီးနှဈမွှာကိုပငျ ထှငျးဖောကျမွငျတှစေ့သေလိုဖွဈနပေသေညျ။ ထမီတိုတိုကို သူမခါးအထကျမှာ ခပျတငျးတငျး စညျးနှောငျဝတျဆငျထားသဖွငျ့ သလုံးသားဝငျးဝငျးကလေးမြားပျေါလှငျလို့နကော တငျပါးအိအိကားကားကွီးနှဈဖကျကို လှုပျလီလှုပျလဲ့နှငျ့ အိမျနောကျခနျးဖကျဆီသို့ ခပျသုတျသုတျကလေး လြှောကျဝငျသှားပွနျတာကို တှရေ့လသေညျ။
“မောငျထူးကြျော မပွနျလိုကျနဲ့ဦးနျော သား အခြိနျတော့ရတယျမဟုတျလား ” “ရပါတယျ အနျတီ ဖွေးဖွေးလုပျပါ ” အိမျရှအေိ့မျနောကျ လှမျးအျောပွောရငျး သူမဝငျရောကျသှားရာဆီကို ထူးကြျော မသိမသာ ခိုးခြောငျးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့က အအေးဖနျခှကျနှဈလုံးကို အရှမှေ့ာခပြွီး အအေးတဈခုခုကို ဖြျောစပျနဟေနျတူပါသညျ။ မကွာပါ သူမ အအေးခှကျနှဈခှကျကိုငျကာ အိမျရှကေို့လှမျးထှကျလာခဲ့ပွီး တဈခှကျကို ထူးကြျောဆီကမျးပေးလိုကျရငျး … “ရော့သောကျ ငါ့မောငျ အဲ …ငါ့တူကလေး ဟငျး ဟငျး ဟငျး ” “ရပါတယျ ဘယျလိုချေါချေါပါ … မ မ ရဲ့ ” “ဟငျ မငျး ဘယျလိုချေါလိုကျတယျ မမတဲ့လား …အဲလိုချေါတာ ပိုပွီး နားဝငျခြိုသလိုပဲနျော မောငျလေး မငျးအသကျ ဘယျလောကျရှိပွီလဲ ထူးကြျောရယျ ” “အဟငျး ဟငျး … ဟငျး ” ထူးကြျောလညျး ရှကျစနိုးပုံစံနှငျ့ရယျနလေိုကျပွီးမှ …
“ဒီနှဈဆိုရငျ သုံးဆယျပွညျ့ပါပွီ အနျတီ့ ထကျတော့ အမြားကွီး ငယျမှာပါ ” “အို အို အနျတီတော့မချေါနဲ့ကှယျ မမ လို့ပဲ ချေါ ရတယျ … အဟငျးဟငျး … မငျးနဲ့ မမနဲ့က ကှာလှနျးမှ ၁၅ နှဈ ၁၆ နှဈလောကျ ရှိမှာပါ မောငျလေးရယျ ” “မမ ကနြေပျသလို ချေါပါ့မယျ ကြှနျတေျာ့ကိုလညျး ထူးကြျော ဒါမှမဟုတျ မောငျလေးပဲ ချေါပါ … ဟို အဲ မမ … ” “မမမွငျ့ ပေါ့ … အားလုံး ဒီလိုပဲ ချေါတာပဲ … ကဲ ကဲ … စကားကောငျးနတောနဲ့ အအေးလညျးသောကျစမျးပါကှယျ မမလကျရာ သံပုရာအအေးလေး ဘယျ့နှယျလဲ ” ထူးကြျောလညျး သံပုရာရညျကို တဈစုပျ စုပျကွညျ့လိုကျပွီး … “ကောငျးတယျ မမရဲ့… မမလကျရာက ဆိုငျတောငျဖှငျ့လို့ရတယျ သိလား ” ဆိုပွီး ခပျမွှောကျမွှောကျကလေးပွောလိုကျရာ ဒျေါနီနီမွငျ့ တဟငျးဟငျးရယျပွီး မကျြလုံးရှဲကွီးမြားနှငျ့သူ့ဖကျကို အဓိပ်ပါယျပါပါ စောငျးငဲ့၍ကွညျ့လိုကျပါသညျ။ နှဈယောကျသား ဧညျ့ခနျးထဲက ကွိမျကုလားထိုငျနှဈလုံးပျေါမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ၍ ခွခြေိတျထိုငျရငျး စကားကောငျးနကွေရာ ထူးကြျောက သူမတဈကိုယျလုံးကို စစေ့ကွေ့ညျ့၍ အကဲခတျနသေလို ဒျေါနီနီမွငျ့ကလညျး ထူးကြျောကို ကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့လုပျ၍ ခန်ဓာကိုယျအထကျအောကျ မကနျြအောငျ တိတျတခိုး ကွညျ့ရှုအရသာခံနလေသေညျ။
ဖိုနှငျ့မတို့၏ ထူးခွားလှသော ဆှဲဆောငျမှုအားပငျတညျး။ ထူးကြျော၏ စစေ့ပျလှသောမကျြလုံးမြားက ခွကေိုခြိတျထိုငျနသေော ဒျေါနီနီမွငျ့၏ ခွသေလုံးသားနှဈဖကျ အောကျနားဆီကနေ ထမီအောကျစကလေးလှတျကာ လပျဟာလကျြရှိသော အသားဆိုငျဝငျးဝငျးအိအိ ကလေးတှရှေိရာဆီကို မတျောတဆ မကျြစိခလုတျတိုကျ ရောကျရှိသှားလသေညျ။ ပေါငျခှဆုံရှိ လြှို့ဝှကျအင်ျဂါဆီကို မရောကျပမေယျ့ ပေါငျရငျးအသား ဝါဝါဝငျးဝငျးကလေးမြားကိုတော့ အတိုငျးသားကွီး မွငျတှခှေ့ငျ့ရလိုကျပွီဖွဈသညျ။ မကျြစိကသာရောကျနပေမေယျ့ စကားစမပွတျအောငျဆိုပွီး ထူးကြျောက … “အျော ဒါနဲ့ မမစောစောက ပွောတော့ ခရီးသှားဖို့ရှိတယျဆိုတာ ဘယျကိုသှားမှာမို့မြားလဲ မမရဲ့ ကြှနျတေျာ့ဆိုငျကယျနဲ့ သှားမယျဆိုရငျကော ဖွဈနိုငျမှာလား” ဒျေါနီနီမွငျ့ မကျြမှောငျကလေး အသာကြုံ့ကာ စဉျးစားသညျ။ “အငျး ဖွဈနိုငျတယျ ဒါပမေယျ့ တဈညအိပျဆိုတော့ မငျးနဲ့မမ အငျး … မောငျနှမတှလေို့ပွောလညျးရတာပဲ ဘီးလငျးတောငျစှနျးအထိသှားမှာ မောငျလေး အငယျမဆီ ပစ်စညျးလူကွုံပါးဖို့ ရှိလို့ပါ … ဒါဖွငျ့ … မမ သှားဖွဈတာနဲ့ မငျးကို ချေါလိုကျမယျလေ … ဟုတျလား ” “ကြေးဇူးပါ မမရယျ ”
“အံမယျ ကြေးဇူးတငျရမှာက ကြှနျမပါတဲ့ ရှငျ …ကိုငျး မပွနျခငျ မငျးအတှကျ …” သူမဘာလုပျမညျဆိုတာ ကွိုသိလိုကျတာမို့ ထူးကြျောထိုငျရာကနေ လှဈကနဲထပွီး ပိုကျဆံအိတျဖှငျ့ကာ ငှစေက်ကူတဈထပျကို နှိုကျထုတျမလိုလုပျနသေော ဒျေါနီနီမွငျ့လကျကို ဖမျးဆှဲခြုပျကိုငျထားလိုကျမိသညျ။ “မမ မ လုပျနဲ့လေ ကြှနျ တျော မ မလိုပါဘူး ” “အိုးး လှတျ ဖယျပါ မောငျလေး မမက ဒီငှမေဆုံးတာပဲ ကြေးဇူးတငျရဦးမှာ ” “ဟာ မပေးနဲ့ တျော ပွီ မမ ဒီလို လုပျရငျ နောကျဆို ဆိုငျကယျသှားဖို့ ချေါလညျး ကြှနျတျောလာမှာ မဟုတျတော့ဘူး ” “မရဘူး ယူကိုယူရမယျ မောငျလေး ထူးကြျော မငျးအသာနစေမျး ” မယူဘူး ယူရမယျ လုပျကာ နှဈယောကျသား ရုနျးရငျးဆနျခတျကလေးဖွဈပှားပွီး ဒျေါနီနီမွငျ့၏ ကိုယျလုံးအိအိကလေးက ထူးကြျောရငျခှငျထဲကို မထငျမှတျဘဲရောကျရှိသှားသညျ။ ထူးကြျော သူမလကျကောကျဝတျနှဈဖကျကို မလှတျဘဲ ကိုငျမွဲကိုငျထားပွီး ပိုကျဆံအိတျထဲမှ ပိုကျဆံတဈထပျလုံး ကွမျးပွငျပျေါလှငျ့ကသြှားသညျ။ “ဆောရီး မမ ကြှနျတျော ပွနျကောကျပေးမယျ ငှတေော့ မယူပါရစနေဲ့ ” “မမ မငျးကို ကိုယျ့မောငျလေးအရငျးတဈယောကျလို ခဈြလို့ခငျလို့ပေးတယျမှတျပါ မြားမြားမယူလညျး ငှတေဈသိနျးလောကျတော့ဖွငျ့ ယူသှား မငျးသုံးဖို့ပေါ့ ” မမနီနီမွငျ့က ထူးကြျော ပုဆိုးခါးပုံစထဲကို ငှစေက်ကူ တဈသိနျးကပျြတိတိ(ငါးထောငျတနျ တဈအုပျ)ကို အတငျးအကွပျပငျ ထိုးထညျ့ပေးသညျ။
မယူဘူးလုပျကာ ရုနျးကနျရငျး ထိုငျရာက ထအပွေးမှာ ထူးကြျောပုဆိုးက မထငျမှတျဘဲ ကှငျးလုံပုံကြှတျကသြှားရာ အောကျခံဘောငျးဘီလညျး ဝတျလဝေ့တျထမရှိတာမို့ ထူးကြျော လီးတနျးလနျးနှငျ့ ဖွဈကာသှားရတော့သညျ။ “အိုးးး မ … မမ ” “ဟငျ …မောငျ မောငျလေး … ခိခိ ခိ ” ဒျေါနီနီမွငျ့ရော သူပါ ကွကျသသေပွေီး ထူးကြျောလညျး ကွောငျတကျတကျနှငျ့ ဒီအတိုငျးရပျနမေိခိုကျဝယျ ဒျေါနီနီမွငျ့တဈယောကျ သူ့ရဲ့စံခြိနျမီဖွဈသော တုတျတုတျထှားထှားအလြှားရှညျရှညျ ငပဲကွီးအား အနီးကပျအနအေထားအတိုငျး ဝဝလငျလငျကွီး တှမွေ့ငျရှုစားခှငျ့ကို ရရှိခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ထူးကြျော တဈဖကျလှညျ့၍ ပုဆိုးပွနျဝတျလိုကျသညျ။ သူ့မကျြနှာလညျး ပွုံးစိစိကွီးဖွဈနပွေီး ဒျေါနီနီမွငျ့သူ့လီးကို မွငျတှသှေ့ားသဖွငျ့ မရှကျသညျ့အပွငျ ပိုလို့တောငျမှ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ဖွဈနမေိပါသေးသညျ။ “မမ ပိုကျဆံ ပွနျယူနျော မယူရငျ မမလိုပဲ ကြှနျတျောအတငျးထညျ့ပေးမှာ ”
“ထညျ့လေ ဘယျနရောထညျ့မှာလဲ ခိခိ ခိ …မငျးက လူနံပိနျသလောကျ ဟငျး ဟငျး လူနဲ့တောငျမလိုကျဘူး မမ ထငျတောငျမထငျထားမိဘူး ” ဒျေါနီနီမွငျ့လညျး ထူးကြျောမနတေတျအောငျ စနောကျ၍ပွောလိုကျရာ … “အာ မမကလညျး ပေါကျကရ ပွောတော့မယျ ဟငျးဟငျး ကဲ ဒီမှာရော့ မမ ပိုကျဆံတှေ ပွနျယူ ” “အို အို အိုးးး မ မလုပျနဲ့ မောငျ …လေး အာ …ပွနျယူကှာ ဒုက်ခပါပဲဟယျ ဒီကလေး ” ဒျေါနီနီမွငျ့ကိုယျကလေးတှနျ့ ၍ ရုနျးသညျ။ ထူးကြျောက သူမအကြ င်္ီရငျဘတျကွားထဲကို ငှစေက်ကူတှေ အထပျလိုကျကို လုံးထှေးပွီး ပွနျထိုးထညျ့ပေးနသေညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့ရငျဘတျကွားထဲ သူ့လကျက တိုးဝငျသှားခြိနျဝယျ တငျးမာလုံးခဲ၍ အိအိကလေးဖွဈနသေော နို့အုံကွီးနှဈလုံးကို သူ့လကျက တိုကျရိုကျပငျ ထိတှမေိ့သှားပွီး ထူးကြျောလညျး မသိဟနျပွု၍ နို့ကို ဖဈြနယျညှဈကိုငျပဈလိုကျပါသညျ။ သူမကလညျး မခလှေပါ။ ရငျဘတျကွားထဲက ပိုကျဆံကို မရမက ပွနျလုယူကာ ထူးကြျောခါးကွားထဲကို ပွနျထညျ့သညျ။
နှဈယောကျသားမကျြနှာခငျြးဆိုငျ တှနျးရုနျး၍ ထူးကြျောလကျက သူမရငျဘတျကွားက ပွနျထှကျမလာသေးသလို ဒျေါနီနီမွငျ့လကျကလညျး သူ့ပုဆိုးစကို တမငျတကာ ဖွလြှေော့ခြှတျခြ၍ ခါးအောကျပိုငျး ပေါငျခှဆုံရှိ သူ့လီးကွီးကို မတျောတဆလိုလိုပုံစံနှငျ့ တမငျတကာပငျ ဖဈြကိုငျဆုပျဆှဲပဈလိုကျပါသညျ။ “အား မမ လှတျ လှတျ ပါ ” “မ လှတျဘူး မငျးကတြော့ မလှတျဘဲနဲ့မြား ဟှငျး လာစမျး ပိုကျဆံမယူခငျြဘူးဆိုတဲ့ကောငျလေး သိမယျ ” “အ အား ယူ ယူမယျ ယူပါ့မယျ နာ နာတယျမမရဲ့ ကြှနျတေျာ့ဟာကွီး ဆောငျ့မဆှဲနဲ့လေ ” “ဘာလဲ ပွတျထှကျသှားမှာစိုးလို့လား ဟှနျး ” “ဟုတျဘူး မမရယျ လ လ လီး … တောငျ တောငျလာရငျ ခကျမှာ ဟငျးဟငျး ဟငျး ” “အမယျလလေ့ေး လီးတောငျ တာမြား … နီနီမွငျ့တို့က အံတိုနပွေီ ” “မမ ကွညျ့ခငျြလို့ လား ” “…… …… ” နီနီမွငျ့ ဘာမြှပွနျမပွော အငျးမလုပျ အဲမလုပျလုပျနသေညျ။ ထူးကြျော မထူးဇာတျခငျးပွီး ပုဆိုးခြှတျခလြိုကျသညျ။ သူ့လီးက သူပွောသလိုပငျ မတျမတျတောငျခငျြနပွေီ ဖွဈသညျ။ ကိုငျးခရမျးသီးကွီးနှယျ ရှညျလမြောကွီးဖွဈကာ တှဲလောငျးကနြသေောလီးခြောငျးတှဲတှဲကွီးက ပိနျပိနျသှယျသှယျဖွဈသော သူ့ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ဘယျလိုမှ မအပျစပျ မလိုကျဖကျလှဘဲ ဖွဈနပေသေညျ။
“နညျးတာကွီး မဟုတျဘူး ဟှနျး ” နီနီမွငျ့ ပါးစပျမှ သူ့ဖာသာသူ ရရှေတျသလို အသံကလေးထှကျလာသညျ။ သူမမကျြလုံးအစုံကတော့ ထူးကြျောလခြောငျးတုတျတုတျ တှဲတှဲကွီးကို တအံ့တသွငေးမောကွညျ့နပေသေညျ။ “မမ ငှကေို မလိုခငျြပါဘူး ကြှနျတျော မမ ကို ခငျလှနျးလို့ ကွညျ့ခငျြတယျဆိုလို့ ပွပေးတာနျော ” “ငှမေလိုခငျြ မငျးက ဘာလိုခငျြလို့တုနျး” ပွောပွီးမှ သူမစကားလှနျမှနျးသိ၍ ပွနျဖာထေးရှာပါသညျ။ “မငျး မမကို အထငျတော့ မသေးရဘူးနျော ထူးကြျော ” “အို မမကလညျး ဒါ အထငျသေးစရာလား လို့ အထငျမသေးတဲ့အပွငျ အထငျကွီးလို့ ခဈြလို့ ” ထူးကြျောပွောပွီး သူမကိုဆကျပွီး စကားနာထိုးမနတေော့ဘဲ သူမခါးလေးကို သိမျးကြုံးပှဖေ့ကျပဈလိုကျသညျ။ ရငျသားအုံအိအိကွီးနှဈမွှာကို လကျတဈဖကျက ဖဈြနယျပဈလိုကျရငျး ကနျြတဈဖကျက ဖငျသားအိအိကွီး နှဈဖကျကွားထဲကို လကျလြှို၍ နှိုကျသှငျးလိုကျကာ ဖငျအကှဲကွောငျးအတိုငျး အောကျကနအေထကျကို ပှတျဆှဲတငျလိုကျပွီး ထမီအောကျနားစကလေးကိုပါ တဈလကျစတညျးဆှဲလှနျတငျလိုကျပါသညျ။
“အိုးး မငျးးး မငျးးးး … သိပျ ရမျးကားတာပဲ ထူးကြျောရယျ … ဟငျးးး … ” ဒျေါနီနီမွငျ့မကျြနှာတဈခုလုံး ရှကျစိတျဖွငျ့ နီရဲတှတျလို့ သှားသညျ။ သူမလကျက ထမီကိုပွနျလညျ ဖုံးဖိသျောလညျး မရတော့ပေ။ ထူးကြျောက သူမထကျကို အရငျလကျဦးနပွေီ။ အသံမထှကျဘဲ ကိုယျကလေးကို တှနျ့လိမျရုနျးကနျနရေငျးက နီနီမွငျ့လကျတဈဖကျက သူ့လီးကွီးရှိရာဆီကို မရညျရှယျဘဲ ရောကျရှိသှားခဲ့ရပွနျလသေညျ။ “မ မမ ” “မောငျလေး ဟငျ့ ဟငျ့ အို သိပျမဆိုးနဲ့ကှယျ ” သူမ အသံက တိမျဝငျနသေလို အားအငျဖြော့တော့လှနျးနပေသေညျ။ ထူးကြျော၏လကျရဲဇကျရဲနိုငျမှုက ဒီနရောမှာ ထိရောကျမှုရှိလှနျးလှပသေညျ။ အမြိုးသမီးကွီး၏စောကျပတျကို လကျဖဝါးကွမျးကွီးဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျးပငျ ပှတျသပျပဈလိုကျကာ ထူထပျသောအမှေးအမွှငျအုံကွီးကို အပျေါသပျတငျလိုကျပွီး သူမစောကျခေါငျးထဲ လကျခြောငျးမြားထိုးသိပျထညျ့၍ စောကျစိကလေးကိုရော စောကျပတျအုံကွီး တဈခုလုံးကိုပါ အပျေါကွှတကျလာအောငျ တဇပျဇပျထိုးနှိုကျဆောငျ့သှငျးပေးလိုကျလသေညျ။ “အ အ … မောငျ မောငျလေး … မ … မလုပျ အ …အား ”နီနီမွငျ့တဈယောကျ ဒူးညှတျကာ ပြော့ကသြှားရှာပါသညျ။ သူမလကျက ဆုပျဆှဲကာ ကိုငျထားသော ထူးကြျောလီးလညျး လကျထဲကနေ ပွုတျကြှတျ၍ သှားရလသေညျ။ ထူးကြျော သူမကိုယျပျေါကို ဖိမှောကျ၍ အိပျခလြိုကျသညျ။
အပျေါပိုငျးရှိဘလောကျဈအကြ င်္ီအပါးလေးကို ဆှဲလှနျ၍ ဘျောလီဝတျဆငျမထားသညျ့ နို့ကွီးနှဈလုံးကို တဈလှညျ့စီ ပွှတျကနဲပွှတျကနဲအသံထှကျအောငျ စို့ပဈလိုကျသညျ။ သူမခါးမှ ထမီကို ကှငျးလုံးကြှတျခြှတျခလြိုကျပွီး သူတို့နှဈယောကျနှငျ့ဝေးရာဆီကိုရောကျအောငျ တဈလကျစတညျး ကနျထုတျပဈလိုကျပါသညျ။ သညျ့နောကျမှာတော့ သူ၏အဆငျသငျ့ တောငျမတျနပွေီဖွဈသော လီးကွီးကို ဒျေါနီနီမွငျ့စောကျပတျအကှဲကွောငျး၏အောကျဖကျရှိ စောကျခေါငျးပေါကျကဉျြးကလေးထဲသို့ တဈဆုံးမွုပျသညျအထိ ဝငျရောကျသှားအောငျ အရှိနျပွငျးပွငျးနှငျ့မနားတမျး လိုးဆောငျ့ပဈလိုကျ လတေော့သညျ။ “ဇှတျ ဗွှတျ … ဗွိ စှပျ … ဇှပျ ” “အ အမေ့ အီး … အငျ့ အငျ့ ဟငျ့ မောငျ မောငျထူး ကြျော … သေ သပေါပွီ… တကတညျး လူကို အသလေိုးတာပဲ အိ အီး ဟီး … အီး … ” “စှတျ … ဖှပျ ဘုတျ … စှိ ဇှပျ ဘှတျ … ဗှပျ … ဗလပျ ဘုတျ… ဖတျ ဘတျ … ဗွိ ပွှတျ ဗွှတျ … ” “အိ အီး … အီးယာ့ … အ အလာ့… လာ့ …လားးး နာ နာတယျ အရှီး ကြှတျ …သေ ပီ အိ အီးအီး ” လူငယျသလောကျ အားအငျကွီးမားသနျစှမျးမှုက ဒျေါနီနီမွငျ့ကို ရုတျခွညျးအငိုကျမိသှားခဲ့စပွေီ။
သူမကိုယျတိုငျလညျး လီးနှငျ့ပကျပကျစကျစကျ အလိုးမခံရတာကွာပွီဖွဈ၍ ယောကျြားပြိုတဈယောကျ၏ လီးနှငျ့အတှမှေ့ာ မလူးသာမလှနျ့သာ မရုနျးဖယျသာဘဲဖွဈခဲ့ရပွီး လြှပျစဈဓာတျအလိုကျခံလိုကျရသလို တုနျတခိုကျခိုကျနှငျ့ မိနျးမူးသာယာနမေိရာက ထူးကြျောပငျ့မွှောကျဆောငျ့လိုးခကျြမြားအတိုငျး အောကျကနေ သူမစောကျပတျတဈခုလုံးကို ကော့ကာကွှကာနှငျ့အလိုကျသငျ့ပငျ ခံညှောငျ့ဆောငျ့လိုးပေးနမေိပါသညျ။ လိုးခကျြက ကွမျးသညျ။ သှကျသညျ။ မီးပှငျ့မတတျလညျး ထိခကျြက ပွငျးထနျလှနျးနပေသေညျ။ နီနီမွငျ့ စိတျရိုငျးဝငျပွီး … “လိုး လိုးစမျး ငါ့မောငျ မငျးဒီလောကျ ငါ့စောကျပတျလိုးခငျြနရေငျလညျး ကှဲပွဲသှားအောငျသာ လိုးလိုကျစမျးပါ ထူးကြျောရာ ” “မမကို ကြှနျတျော စျောကားမိသလိုဖွဈသှားရငျ တောငျးပနျပါတယျ မမရယျ ” “မတောငျးပနျနဲ့ မငျး ငါ့ကို ဘယျကတညျးက လိုးဖို့ကွံစညျနသေလဲ မှနျမှနျပွောစမျး မညာနဲ့ ထူးကြျော ” “မမကို လိုးခငျြနတောကွာပွီ လိုးခှငျ့ရတာနဲ့ လိုးဖို့ စိတျကူးထားပွီးသားပဲ ” “အေး အဲဒီလို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပါ မငျးလိုးခငျြလို့ ငါအလိုးခံပေးမယျ လိုးခငျြသလောကျ ဘယျနှဈခြီလိုးလိုး ရတယျ စကားတော့မဖှာနဲ့ ကွားလား ထူးကြျော …ငါ့စကားနားမထောငျရငျ မငျးနဲ့ငါ သခေနျးပွတျပဲ ”
“မမရယျ ကြှနျတျော ခုလိုဖွဈတာ မထငျမှတျဘဲဖွဈတာ ကြှနျတျော မမဂုဏျငယျအောငျ ဘယျတော့မှမလုပျဘူး ယုံပါ ” “အေး မငျးစကားနဲ့မငျးပဲ ကဲပါ လိုးတာ ဒီလောကျကွာနပွေီ ငါ့အရညျတှလေညျး ထှကျကုနျတာ မနညျးတော့ဘူး မငျးမပွီးသေးတာ အံ့သွတယျ တကယျပဲ ” “ကြှနျတျော ခုလို အခှငျ့ရတုနျး နှဈခြီဆကျလိုးခငျြတယျ မမ ခှငျ့ပွုပါနျော ” “ဟငျး မောငျလေးရယျ ” နီနီမွငျ့ ဘာစိတျပေါကျတယျမသိ မခငျြ့မရဲ သကျပွငျးရှညျကွီးခပြွီး ထူးကြျောကြောပွငျကို ခပျတငျးတငျးကွီး ပှဖေ့ကျထားလိုကျရာက … “လိုးမှာဖွငျ့ လိုးစမျးပါ ကိုယျတျောရယျ မမ ခုလို အလိုးမခံရတာလညျး ကွာနပွေီ ဒါလေးတောငျ မငျး မသိဘူးလား ဟငျ ” အားမလိုအားမရ ပွောလိုကျမိရငျး သူမစောကျခေါငျးပေါကျထဲ ဝငျထှကျနသေောလီးကွီးကို တငျပါးကွီးပငျ့မွှောကျကော့ဝိုကျကာဖွငျ့ အောကျကနေ အဆကျမပွတျညှောငျ့၍ ညှောငျ့၍ ပေးနမေိလတေော့၏။ ထူးကြျောလညျး ဒျေါနီနီမွငျ့ဖငျသားအိအိကားကားကွီးနှဈဖကျကို အားပါးတရ အောကျကနပေငျ့မကိုငျကာ ဆုပျဆှဲရငျး ဇယျဆကျသလို လိုးပေးလိုကျသညျ။ အခကျြနှဈဆယျအစိတျမက အခကျြလေးငါးဆယျ နာရီဝကျနီးပါးလောကျ ကွာအောငျ အပီအပွငျ ထငျတိုငျးကွဲ၍ လိုးပဈလိုကျရငျး သူ့လီးထိပျမှ ကငျြကနဲကငျြကနဲ ဖွဈလာပွီး ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈသော လရညျပဈြခြှဲခြှဲမြားကို ဒျေါနီနီုမွငျ့၏ စောကျခေါငျးလေးထဲမှတဈဆငျ့ သူမသားအိမျထဲသို့ အဆကျမပွတျပငျ ပနျးလှတျထုတျပဈလိုကျလသေညျ။
ဒျေါနီနီမွငျ့လညျး ငိုခငျြရကျလကျတို့ ဆိုသလိုပငျ ထူးကြျောပွီးလြှငျပွီးခငျြးပငျ သူမစောကျပတျဆီမှ စောကျရညျမြား ရကောတာမှရလှေတျလိုကျသကဲ့သို့ တဖွောဖွော ပနျးထှကျလာရပွီး ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ပွီးဆုံးခွငျးသို့ ရောကျခဲ့ရလတေော့၏။ နှဈယောကျသား မောမောနှငျ့စကားမပွောနိုငျကွသေးဘဲ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဖကျကာ ထပျမှောကျလဲလြှောငျးနမေိကွ၏။ ထူးကြျောက သူမနှုတျခမျးလေးမြားကို အသာအယာပငျ စုပျဆှဲနမျးလိုကျရာ သူမဆီမှ ခကျြခငျြးပငျ တုံ့ပွနျနမျးစုပျပေးလာပါသညျ။ နှုတျခမျးခငျြးစုပျရုံမက လြှာခငျြးလညျး ယှကျလိမျဆှဲကာ ခလုတျတိုကျမိကွသညျ။ အောကျနှုတျခမျး အပျေါနှုတျခမျး တဈလှညျ့စီ အနမျးပေးရငျး ထူးကြျောလကျနှဈဖကျက ဒျေါနီနီမွငျ့၏ ရငျသားအိအိကွီးနှဈမွှာကို စတငျ လူးလှိမျ့ဖဈြကိုငျပေးလာသညျ။ နို့သီးခေါငျး လုံးခြှနျခြှနျ ကလေးနှဈခုကို လှိမျ့နယျဖဈြခကြေစားရငျး နို့တဈဖကျစီကို စို့ပေးလိုကျရာ ဒျေါနီနီမွငျ့နှုတျဖြားဆီမှ တအငျးအငျး တဟငျးဟငျးနှငျ့ ငှကျဖြားတကျသလို ညညျးသံကလေးမြား စတငျ ထှကျပျေါလာရတော့သညျ။
“အိုး မောငျရယျ ကောငျးလှခညျြလားကှယျ ဘယျတုနျးကမြား ဒီအတတျတှကေို တတျနပေါလိမျ့နျော ” “မမကို ခဈြလှနျးလို့ပါ မမရယျ ” “မငျး တကယျပွောနတောလား လမျးကွုံတုနျး အပြျောခဈြတာ မဟုတျဘူးလား” “မမ ယုံကွညျအာငျ ဘယျလို သကျသပွေရမလဲ ” “ခဈြပေး ခုနကလို အမုနျးထပျဆှဲပေးဦး မမ မငျး အဲဒီလိုလုပျပေးတာကို သိပျကွိုကျတယျ ” “တကယျနျော မမ ဟိုဖကျလှညျ့ပေးပါ မမဖငျကွီးကို ကွညျ့ခငျြတယျ ဖငျကွညျ့ရငျး လီးတောငျခငျြတာ မမစောကျပတျကိုလညျး အားရပါးရမှုတျပေးခငျြသေးတယျ ” “မောငျလေး မောငျထူး မမပွောပွီးပွီပဲ မဟုတျလား မငျးသဘောအတိုငျးပါ လို့ ” မမနီနီမွငျ့က ကိုယျကို တဈဖကျသို့ လှညျ့ကာ လှဲအိပျပေးလိုကျသညျ။ သူမဖငျသားကွီးနှဈဖကျကို ကားကားကွီးလုပျပေးထားသညျ့အတှကျ အနောကျကကွညျ့နသေူ ထူးကြျောအဖို့ သူမဖငျအိအိကွီးတှကေို တစိမျ့စိမျ့အရသာခံကွညျ့ရှုရငျး ဖီလငျတှေ တဖွညျးဖွညျးတကျလာရလသေညျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ လီးက ပြော့ခှနေရောက တမုဟုတျခငျြးပငျ ပွနျလညျတောငျမတျလာရပသေညျ။ ထူးကြျော သူမဖငျကို ကွညျ့ရငျး သူ့လီးကို လကျနှငျ့ဂှငျးရိုကျ၍နသေညျ။ သူမဖငျနှဈဖကျကို လကျနှငျ့ထပျမံ၍ ပွဲပွဲကားကားလုပျပေးလိုကျရငျး ဖငျစအိုပေါကျကလေးထဲကို လကျတံတှေးဆှတျ၍ ထညျ့လိုကျသညျ။ လကျနှဈခြောငျးပူး ထိုးထညျ့လိုကျခွငျးဖွဈ၍ နီနီမွငျ့ ဖငျတှနျ့တကျသှားမိပါသညျ။ ထူးကြျော သူမဖငျကိုနမျးသညျ။ မကျမကျစကျစကျ နမျးပဈလိုကျခွငျးဖွဈပွီး ဖငျပေါကျကိုပါ လြှာနှငျ့ယကျ၍ ထိုမှတဈဆငျ့ အောကျကို လြှောဆငျးသှားလိုကျကာ စောကျဖုတျပွူတဈတဈကလေးကိုပါ ပါးစပျနှငျ့ ပွှတျပွှတျဆိုပွီး ဆကျလကျ နမျးစုပျပဈလိုကျပွနျလသေညျ။ “မမ ဒီဖကျပွနျလှညျ့ ” “အငျး မောငျလေး ” နီနီမွငျ့ သူပွောသမြှကို တသှမေတိမျး လိုကျနာနသေညျ။ ကိုယျကို တဈပတျပွနျလှညျ့လိုကျတော့ သူမစောကျပတျကို ထူးကြျောမကျြနှာအရှမှေ့ာ တမငျတကာ ဖွဲပွလိုကျသလို ဖွဈသှားသညျ။ ဒီအခြိနျကမြှ ထူးကြျောလညျး သူမစောကျပတျကို ကုနျးပွီးနမျးလိုကျတော့သညျ။
ထူးကြျောမှာ ငယျစဉျလူပြိုပေါကျစ အရှယျလောကျကတညျးက မမကွီးမြား၏အသညျးစှဲဖွဈခဲ့သဖွငျ့ ဘာဂြာမှုတျသညျ့အလုပျကို ရှယျတူယောကျြားလေးတှထေကျ ပိုပွီး လုပျတတျကိုငျတတျရှိနပွေီဖွဈသညျ။ ဘာဂြာအလှနျကောငျးသညျဟု မမတှအေကွားမှာ အထူးတလညျ ရပေနျးစားသူတဈယောကျဖွဈခဲ့ပါသညျ။ စောကျပတျနှုတျခမျးသား ထူအိအိတှကေို တအားစုပျဆှဲနမျးရငျး အကှဲကွောငျးလေးအတိုငျး အောကျမှနေ၍ အထကျသို့ လြှာပွားကွီးဖွငျ့ တဈခကျြနှဈခကျြ ပငျ့ယကျသပျတငျပေးလိုကျပါသညျ။ စောကျပတျအကှဲကွောငျးရဲ့ အောကျဖကျက လိုဏျနနျးဝကလေးထဲကို လြှာကိုလိမျ့သှငျးပွီး အသှငျးအထုတျလုပျပေးလိုကျလသေညျ။ နီနီမွငျ့စောကျပတျက သူ့အပွုအစု အယုအယကွောငျ့ထငျသညျ။ အရညျတှစေိုရှဲ၍ ထှကျလာပါသညျ။ ထူးကြျောအရညျတဈစကျမြှ မကနျြအောငျ စုပျပဈလိုကျသညျ။ “ကောငျးလားဟငျ မမ ” “ကောငျး ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရယျ မမ တဈခြီတောငျ ပွီးခငျြတယျ ယကျ ယကျ မောငျလေး ခပျကွမျးကွမျးလြှာနဲ့ယကျပေး မမစောကျပတျ တအားရှလှနျးနပွေီ” လြှာနှငျ့ယကျရုံတောငျမဟုတျဘဲ စောကျခေါငျးထဲကိုလညျး လကျနှဈခြောငျးပူးထညျ့၍ လိုးပေးလိုကျသေးသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့ခမြာ ဘယျလိုမှ စိတျမထိနျးနိုငျရှာတော့ပွီ။
တဈကိုယျလုံးကော့ကွှကာ ထှနျ့ထှနျ့လူးရငျးက သူမစောကျပတျတဝိုကျမှာလညျး စောကျရညျဗရပှ စီးယိုထှကျကလြာခဲ့ရကာ သူမလကျနှဈဖကျက သူ့ခေါငျးကို ရုတျတရကျကွီး တှနျးဖယျပဈလိုကျပွီး … “တျောပွီ မောငျလေး မငျးလီးကို မမတဈလှညျ့စုပျပေးမယျ မငျးအဆငျသငျ့ဖွဈရငျ လိုးကွရအောငျကှယျ မမ မနနေိုငျတော့ဘူး ” “ဒါဖွငျ့ စုပျလေ မမရဲ့ ” ထူးကြျော သူ့လီးကွီးကို နီနီမွငျ့ပါးစပျနားတိုးကပျပေးလိုကျပွီး လီးစုပျစလေိုကျသညျ။ နီနီမွငျ့၏ လီးစုပျပညာကလညျး မခလှေပေ။ ထူးကြျောလိုလူကို ကော့ပြံသှားလောကျအောငျပငျ စှမျးလှနျးလှသညျ။ လီးဒဈထိပျလုံးကို ငုံကာစုပျ၍ လီးကိုယျထညျတဈလြှောကျအား လြှာဖွငျ့ယကျလိုကျဆှလိုကျလုပျပေးသညျ။ ထူးကြျောလီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့တငျးတငျးဆုပျကိုငျကာ လီးတဈခြောငျးလုံး အာခေါငျတှငျးသို့ မဝငျဝငျအောငျသှငျးပွီး ခေါငျးကိုနှိမျ့လိုကျကွှလိုကျလုပျ၍ ပါးစပျနှငျ့လိုးပေးသညျ။ လခြောငျးကိုရော ဂှေးဥနှဈလုံးကိုပါ ပါးစပျနှငျ့တပွှတျပွှတျစုပျ၍ လြှာနှငျ့မရပျမနား ဆှနှူးပေးလိုကျလရော ထူးကြျောလညျး လီးတောငျလှနျလှနျး၍ နီနီမွငျ့ပါးစပျထဲမှာတောငျ သူ့လီးကမဆနျ့ဘဲ ဖွဈသှားခဲ့ရလသေညျ။ ထူးကြျောလီးကွီးက အဆမတနျကွီးထှားလာသညျ။
“လိုးကွစို့ မမရယျ နျော ” သူ့အပွောကိုပငျ နီနီမွငျ့တဈယောကျစောငျ့နပေုံရသညျ။ “မမ ဘယျလိုနပေေးရမလဲ ပွော မောငျလေး ” “ကုနျးလိုကျ မမ ကြှနျတျော အနောကျကလိုးပေးမယျ ” ဒျေါနီနီမွငျ့ ခွလေကျလေးဘကျထောကျပွီး မှောကျခုံရကျ ဖငျကို ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ သူမဖငျကွီးမှာ အယျအယျထှားထှားကွီးဖွဈရာ အသားအရဖွေူဝငျးသလောကျ ဖငျဖှေးဖှေးကွီးဖွဈလြှကျ ခါးလေးကိုအနညျးငယျကှေးညှတျပွီး ဖငျကို ယောကျြားလေးအကွိုကျ ထငျသလို လိုးနိုငျအောငျ အလိုကျတသိ ကော့ထောငျပေးထားသညျ့အနအေထားနှငျ့မို့ ထူးကြျောလညျး လိုးခငျြစိတျကို ဘယျလိုနညျးနှငျ့မြှ ထိနျးခြုပျမထားနိုငျတော့ပါခြေ။ နီနီမွငျ့ဖငျသားကားကားကွီးအား ကုနျးနမျးပဈလိုကျရာက ဖငျနှဈဖကျကို ခပျကော့ကော့လေး စိတျတိုငျးကပြွုပွငျ၍ သူမဖငျသားအနောကျကနပွေီး ပွူးပွဲထှကျနသေညျ့ စောကျပတျကွီးထဲကို သူ့လီးထိပျအားထညျ့သှငျးပွီး ဖှပျ ဇှပျဆိုပွီး အနောကျကနေ ခပျဆတျဆတျကလေးလုပျကာ ဆောငျ့လိုးခလြိုကျလသေညျ။ လီးကွီးက တဈဝကျသာသာလောကျနဈဝငျသှားပွီး နီနီမွငျ့ဖငျကွီး အပျေါကိုငေါ့ထောငျကာ ကောကျတကျသှားရလသေညျ။
ထူးကြျောအပီအပွငျကြုံးလိုးသညျ။ သူမကလညျး ဖငျနောကျပွနျတှနါး၍ ညှောငျ့ဆောငျ့ပေးနသေညျ။ သူ့လီးကွီးလှနျးလှ၍ ခံရခကျြကတော့ မသကျသာလှပေ။ နီနီမွငျ့မကျြနှာလေး ဣနွေ်ဒမဆယျနိုငျလောကျအောငျ ရှုံ့မဲ့နရေပွီး အံတကွိတျကွိတျနှငျ့ပငျ ထူးကြျောလိုးသမြှကုနျးရုနျးခံနကော လီးအရသာကို ကောငျးကောငျးခံစားနလြှေကျရှိပသေညျ။ “မမ အကွိုကျတှရေဲ့လား ” “ကွိုကျပါတယျ ငါ့မောငျရယျ ဒါပမေယျ့ မငျးလီးကွီးက မမရဲ့သသှေားတဲ့လငျထကျတောငျ နှဈဆလောကျ ကွီးမားနသေေးတယျ မမ ဒီလို တဈခါမှ အလိုးမခံဖူးပါဘူးကှယျ မငျးလိုးတာ မမ အသညျးတှအေူတှတေောငျ ဘယျလိုဖွဈကုနျတယျ မသိတော့ပါဘူး ” “မမ သားအိမျထောကျမိလို့လား ဒါဖွငျ့ ရိုးရိုးပဲလိုးရအောငျလေ နောကျကငျြ့သားးရတော့မှ ဖငျထောငျလိုးတာပေါ့ မမကို ဒီနတေ့ဈနလေုံ့း လိုးပေးမယျ ကနြေပျလား ဟငျ မမ” “ကနြေပျပါတယျ မောငျလေးရယျ ဟုတျတယျ မငျးပွောသလိုပဲ ခုနကအတိုငျးပွနျလိုးရအောငျ စောစောက အနောကျကနလေိုးတာ မငျးဟာကွီးက သားအိမျလားဘာလား တဈခုခုထောကျမိနသေလိုပဲ မမ စိတျထဲ တဈမြိုးဖွဈနတေယျ ” “ရတယျ ကြှနျတျော လီးခြှတျလိုကျမယျ မမ ပကျလကျလှနျလိုကျနျော ” နှဈယောကျသားပုံစံပွနျပွောငျးပွီး လှကွေီးထိုးအတိုငျး လိုးပေးလိုကျရသညျ။
နီနီမွငျ့က ဒီပုံစံကွိုကျသလို ထူးကြျောလညျးကွိုကျသညျပငျ။ သူမနို့ကိုစို့၍ စိတျရှိလကျရှိ ကိုယျလိုသလို ဆှဲလိုးလို့လညျးရနပေသေညျ။ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ စတှကေ့ာ ခဈြမဝနိုငျသေးခြိနျမှာ ဒီနညျးအတိုငျး ဖကျရမျးနမျးရှုံ့၍ အခြိနျယူ လိုးရတာလညျး တဈမြိုး အရသာရှိတာအမှနျပဲဖွဈသညျ။ သူမဖငျကွီးကို အိုးပငျ့မပွီး ထူးကြျော ပကျပကျစကျစကျ စခနျးသှားပဈလိုကျသညျ။ သူ့လီးကို တဈဆုံးထညျ့လိုးလိုကျတာမို့ ထိထိမိမိအရသာလညျးရှိပွီး အိကနဲအငျ့ကနဲ ဖွဈဖွဈသှားကာ နီနီမွငျ့သူ့ရငျဘတျကိုပငျ အလနျ့တကွားတှနျးကနျထားလိုကျမိပါသေးသညျ။ ကွီးလညျးကွီး ရှညျလညျးရှညျသောလီးမို့ နီနီမွငျ့တဈယောကျ သူ့ကို လကျမလှတျခငျြလောကျအောငျ အခဈြပိုသှားမိပါသညျ။ ထူးကြျောက အသကျငယျရှယျသူဖွဈ၍လိုးအားဆောငျ့အားလညျးကောငျးသညျ။ မိနျးမအကွိုကျ အကွမျးတဈမြိုးအခြောတဈဖုံ အမြိုးမြိုးလိုးပေးနိုငျပွီး သူမစောကျပတျအတှငျးနံရံတှကေို သူ့လီးကွီး အပွညျ့အသိပျ ထညျ့သှငျးပှတျတိုကျမှုပေးနတောမို့ ဒျေါနီနီမွငျ့တဈယောကျကော့ပြံနအေောငျအလိုးခံနရေကာ ပါးစပျကလညျး တကြှတျကြှတျ အိုးအိုးအငျ့အငျ့ အသံစုံမွညျတမျးညညျးညူရငျး ထူးကြျောခါးကို တငျးတငျးကွပျကွပျဖကျတှယျ၍ ကာမစညျးစိမျအတှကွေီ့းတှနေ့မေိလတေော့သညျ……. ပွီးပါပွီ။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းပြီး အိမ်ခြံဝန်းထဲကို လွုပ်လီလွုပ်လဲ့လျှောက်ဝင်သွားသော ဒေါ်နီနီမြင့်၏အိုးကြီးကို ကြည့်၍ ထူးကျော်စိတ်ထဲက ကောင်းကောင်းကြီး ပြစ်မှားနေမိသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်သည် သူဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲလာသည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ အသက်အားဖြင့် ၄၅ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီ။ ထူးကျော်ထက် အသက် ထက်ဝက်နီးပါးလောက် ကွာသည်။ အဒေါ်အရွယ် အန်တီကြီးအရွယ်သာဖြစ်သည်။ ထူးကျော်က အသက်သုံးဆယ်ပင် မပြည့်သေးပါ။ ဒေါ်နီနီမြင့်က လင်မရှိသည့် မုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးနှစ်ယောက်အမေလည်းဖြစ်သည်။ သမီးတွေက အိမ်ထောင်ရက်သား ကျကုန်ကြပြီး အဝေးမှာ သွားရောက်၍ မိသားစုအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ သူမအနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိပါ။ အချိန်မရွေး ဆွဲစားလို့ရသည်ဆိုတာ သေချာပါသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများစွာအထဲကမှ ထူးကျော်ဆိုင်ကယ်ကိုသာ အမြဲတစေ ရွေးစီးတတ်သည့် သူမကို ထူးကျော်ကိုယ်တိုင်ပင် သတိထားမိလာခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်လေသည်။ထူးကျော်မှာလည်း ဒီလို မိန်းမကြီးတွေ အပီကိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံတွေရှိပါသည်။ အချို့မိန်းမတွေဆိုလျှင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဟိုင်းဝေးခရီးသွားရင်း လမ်းတစ်ဝက်မှာပင် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သူကတော့ဘယ်သောအခါမှ လက်နှေးခဲ့ခြင်းလည်း မရှိပေ။ ဘယ်ယောက်ျား ဘယ်မိန်းမ မဆို လီးနှင့်စောက်ဖုတ် လိုးခြင်းတည်းဟူသော အတွေ့အရသာမှာ သာယာတတ်သူတွေဖြစ်ကြပြီး ဆုံဆည်းမွုမှန်သမျှသည်လည်း ထိုနေရာမှာပင် လမ်းဆုံးလေ့ရှိတတ်ကြတာကို သူသိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်ကွေ့လာခဲ့ပြီးမှ သူမပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဘုရားတင်ဖို့ ဝယ်ယူလာခဲ့သော မေမြို့ပန်းတစ်စည်းက သူ့ဆိုင်ကယ် အရှေ့ခြင်းထဲမှာကျန်နေတာကို သတိထားလိုက်မိပြီး ထူးကျော် သူ့ငမြွေထိုးဆိုင်ကယ်ကို သူမအိမ်ဖက်ဆီ ပြန်ကွေ့လာလိုက်သည်။
ဆိုင်ကယ်စက်သတ်ကာ ဒေါက်ထောက်ပြီး အိမ်ဝင်းထဲကို အသာလျှောက်ဝင်လာခဲ့သည်။ “အန်တီမြင့် … အန်တီမြင့် ” နှစ်ကြိမ်တိတိခေါ်လိုက်ပြီး ပြန်ထူးသံမကြားရ၍ ထူးကျော်လည်း စေ့ထားသော ဘာဂျာတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းကို လှမ်းဝင်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထဲရောက်နေပြီဖြစ်၍ အော်ခေါ်လည်းကြားမည်ဟု ယူဆပြီး … “အန်တီမြင့် ကျွန်တော်ပါ ထူးကျော်ပါ ” ဒေါ်နီနီမြင့် အိမ်နောက်ခန်းထဲက ထွက်လာသည်။ “အော် မောင်ထူးကျော် ပြော ဘာများလဲလို့ ” “ဒီမှာလေ အန်တီ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ပန်းစည်းကျန်နေလို့ လာပြန်ပေးတာပါ” “အိုးး ဟုတ်သားပဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သားရေ မင်းမပြောရင် အန်တီတောင် သတိရဦးမှာမဟုတ်ဘူး ဟင်း ဟင်း ဟင်း လာ လာ အိမ်ထဲမှာ ခဏထိုင် တစ်ခုခုသောက်ပါဦး ” ထူးကျော်လက်ကာပြလိုက်ကာ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ဆိုတဲ့အမူအယာနှင့် … “နေပါစေ ဒုက္ခရှာလို့ အန်တီရယ် ” “အို ဒုက္ခရှာတာတော့ ဘယ်ဟုတ်မှာလဲ သားရဲ့ မင်းကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ကျေးဇူးဆပ်ရတာပေါ့ တခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်သာဆို မင်း ခုပြန်ပေးသလို လာပြီးပေးချင်မှ ပေးမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား အန်တီလည်းဒီနေ့ ခရီးတစ်ခုသွားစရာရှိလို့ဆိုပြီး အိတ်ထဲမှာ ငွေငါးသိန်းလောက်ထည့်ထားမိတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မောင်ကျော်ထူး အဲ မောင်ထူး ကျော် ရယ် “”
“ရပါတယ် အန်တီရယ် ကျွန်တော်က အဲဒီလိုမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး အန်တီရဲ့ ဟင်းဟင်း ” “အေးပါကွယ် အန်တီနားလည်ပါတယ် ခဏနော် အန်တီအဝတ်အစားလဲလိုက်ဦးမယ် ပြီးမှ အအေးအတူ သောက်ကြတာပေါ့ မင်းလည်း ဆိုင်ကယ်တစ်ချိန်လုံး ပတ်မောင်းရတာနဲ့ မောနေပြီ အမောပြေ ကလေးတော့ လုပ်သွားပါ ” သူမနောက်ဆုံးစကားဖြစ်သော အမောပြေကလေးတော့ လုပ်သွားပါ ဆိုတဲ့စကားကြောင့် ထူးကျော်စိတ်ထဲက ရယ်ချင်ပက်ကျိဖြစ်သွားရသလို ပုဆိုးအောက်က ညီတော်မောင်ပင် ထောင်းကနဲ ခေါင်းထောင်ထချင်သလိုလို ဖြစ်သွားရလေသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်အကျ င်္ီအဝတ်အစားလဲပြီး အိမ်နေဝတ်စုံဖြင့်ပင် အခန်းထဲကနေ ပြန်ထွက်လာသည်။ ဘာအခုအခံမျှ ပါမည်မထင်သည့် ဘလောက်စ်လက်ပြတ်ပါးလှပ်လှပ်ကလေးက သူမ၏ထွားထွားအိအိရှိလှသည့် ရင်သားဆိုင်ကြီးနှစ်မြွာကိုပင် ထွင်းဖောက်မြင်တွေ့စေသလိုဖြစ်နေပေသည်။ ထမီတိုတိုကို သူမခါးအထက်မှာ ခပ်တင်းတင်း စည်းနှောင်ဝတ်ဆင်ထားသဖြင့် သလုံးသားဝင်းဝင်းကလေးများပေါ်လွင်လို့နေကာ တင်ပါးအိအိကားကားကြီးနှစ်ဖက်ကို လွုပ်လီလွုပ်လဲ့နှင့် အိမ်နောက်ခန်းဖက်ဆီသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ကလေး လျှောက်ဝင်သွားပြန်တာကို တွေ့ရလေသည်။
“မောင်ထူးကျော် မပြန်လိုက်နဲ့ဦးနော် သား အချိန်တော့ရတယ်မဟုတ်လား ” “ရပါတယ် အန်တီ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ” အိမ်ရှေ့အိမ်နောက် လှမ်းအော်ပြောရင်း သူမဝင်ရောက်သွားရာဆီကို ထူးကျော် မသိမသာ ခိုးချောင်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်က အအေးဖန်ခွက်နှစ်လုံးကို အရှေ့မှာချပြီး အအေးတစ်ခုခုကို ဖျော်စပ်နေဟန်တူပါသည်။ မကြာပါ သူမ အအေးခွက်နှစ်ခွက်ကိုင်ကာ အိမ်ရှေ့ကိုလှမ်းထွက်လာခဲ့ပြီး တစ်ခွက်ကို ထူးကျော်ဆီကမ်းပေးလိုက်ရင်း … “ရော့သောက် ငါ့မောင် အဲ …ငါ့တူကလေး ဟင်း ဟင်း ဟင်း ” “ရပါတယ် ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်ပါ … မ မ ရဲ့ ” “ဟင် မင်း ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ် မမတဲ့လား …အဲလိုခေါ်တာ ပိုပြီး နားဝင်ချိုသလိုပဲနော် မောင်လေး မင်းအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ထူးကျော်ရယ် ” “အဟင်း ဟင်း … ဟင်း ” ထူးကျော်လည်း ရှက်စနိုးပုံစံနှင့်ရယ်နေလိုက်ပြီးမှ …
“ဒီနှစ်ဆိုရင် သုံးဆယ်ပြည့်ပါပြီ အန်တီ့ ထက်တော့ အများကြီး ငယ်မှာပါ ” “အို အို အန်တီတော့မခေါ်နဲ့ကွယ် မမ လို့ပဲ ခေါ် ရတယ် … အဟင်းဟင်း … မင်းနဲ့ မမနဲ့က ကွာလွန်းမှ ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ်လောက် ရှိမှာပါ မောင်လေးရယ် ” “မမ ကျေနပ်သလို ခေါ်ပါ့မယ် ကျွန်တော့်ကိုလည်း ထူးကျော် ဒါမှမဟုတ် မောင်လေးပဲ ခေါ်ပါ … ဟို အဲ မမ … ” “မမမြင့် ပေါ့ … အားလုံး ဒီလိုပဲ ခေါ်တာပဲ … ကဲ ကဲ … စကားကောင်းနေတာနဲ့ အအေးလည်းသောက်စမ်းပါကွယ် မမလက်ရာ သံပုရာအအေးလေး ဘယ့်နှယ်လဲ ” ထူးကျော်လည်း သံပုရာရည်ကို တစ်စုပ် စုပ်ကြည့်လိုက်ပြီး … “ကောင်းတယ် မမရဲ့… မမလက်ရာက ဆိုင်တောင်ဖွင့်လို့ရတယ် သိလား ” ဆိုပြီး ခပ်မြှောက်မြှောက်ကလေးပြောလိုက်ရာ ဒေါ်နီနီမြင့် တဟင်းဟင်းရယ်ပြီး မျက်လုံးရွဲကြီးများနှင့်သူ့ဖက်ကို အဓိပ္ပါယ်ပါပါ စောင်းငဲ့၍ကြည့်လိုက်ပါသည်။ နှစ်ယောက်သား ဧည့်ခန်းထဲက ကြိမ်ကုလားထိုင်နှစ်လုံးပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ ခြေချိတ်ထိုင်ရင်း စကားကောင်းနေကြရာ ထူးကျော်က သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို စေ့စေ့ကြည့်၍ အကဲခတ်နေသလို ဒေါ်နီနီမြင့်ကလည်း ထူးကျော်ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်၍ ခန္ဓာကိုယ်အထက်အောက် မကျန်အောင် တိတ်တခိုး ကြည့်ရွုအရသာခံနေလေသည်။
ဖိုနှင့်မတို့၏ ထူးခြားလှသော ဆွဲဆောင်မွုအားပင်တည်း။ ထူးကျော်၏ စေ့စပ်လှသောမျက်လုံးများက ခြေကိုချိတ်ထိုင်နေသော ဒေါ်နီနီမြင့်၏ ခြေသလုံးသားနှစ်ဖက် အောက်နားဆီကနေ ထမီအောက်စကလေးလွတ်ကာ လပ်ဟာလျက်ရှိသော အသားဆိုင်ဝင်းဝင်းအိအိ ကလေးတွေရှိရာဆီကို မတော်တဆ မျက်စိခလုတ်တိုက် ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ပေါင်ခွဆုံရှိ လျှို့ဝှက်အင်္ဂါဆီကို မရောက်ပေမယ့် ပေါင်ရင်းအသား ဝါဝါဝင်းဝင်းကလေးများကိုတော့ အတိုင်းသားကြီး မြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မျက်စိကသာရောက်နေပေမယ့် စကားစမပြတ်အောင်ဆိုပြီး ထူးကျော်က … “အော် ဒါနဲ့ မမစောစောက ပြောတော့ ခရီးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်ကိုသွားမှာမို့များလဲ မမရဲ့ ကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်ကော ဖြစ်နိုင်မှာလား” ဒေါ်နီနီမြင့် မျက်မှောင်ကလေး အသာကျုံ့ကာ စဉ်းစားသည်။ “အင်း ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါပေမယ့် တစ်ညအိပ်ဆိုတော့ မင်းနဲ့မမ အင်း … မောင်နှမတွေလို့ပြောလည်းရတာပဲ ဘီးလင်းတောင်စွန်းအထိသွားမှာ မောင်လေး အငယ်မဆီ ပစ္စည်းလူကြုံပါးဖို့ ရှိလို့ပါ … ဒါဖြင့် … မမ သွားဖြစ်တာနဲ့ မင်းကို ခေါ်လိုက်မယ်လေ … ဟုတ်လား ” “ကျေးဇူးပါ မမရယ် ”
“အံမယ် ကျေးဇူးတင်ရမှာက ကျွန်မပါတဲ့ ရှင် …ကိုင်း မပြန်ခင် မင်းအတွက် …” သူမဘာလုပ်မည်ဆိုတာ ကြိုသိလိုက်တာမို့ ထူးကျော်ထိုင်ရာကနေ လှစ်ကနဲထပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်ကာ ငွေစက္ကူတစ်ထပ်ကို နှိုက်ထုတ်မလိုလုပ်နေသော ဒေါ်နီနီမြင့်လက်ကို ဖမ်းဆွဲချုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိသည်။ “မမ မ လုပ်နဲ့လေ ကျွန် တော် မ မလိုပါဘူး ” “အိုးး လွတ် ဖယ်ပါ မောင်လေး မမက ဒီငွေမဆုံးတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာ ” “ဟာ မပေးနဲ့ တော် ပြီ မမ ဒီလို လုပ်ရင် နောက်ဆို ဆိုင်ကယ်သွားဖို့ ခေါ်လည်း ကျွန်တော်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ” “မရဘူး ယူကိုယူရမယ် မောင်လေး ထူးကျော် မင်းအသာနေစမ်း ” မယူဘူး ယူရမယ် လုပ်ကာ နှစ်ယောက်သား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ကလေးဖြစ်ပွားပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်၏ ကိုယ်လုံးအိအိကလေးက ထူးကျော်ရင်ခွင်ထဲကို မထင်မှတ်ဘဲရောက်ရှိသွားသည်။ ထူးကျော် သူမလက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကို မလွတ်ဘဲ ကိုင်မြဲကိုင်ထားပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံတစ်ထပ်လုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်လွင့်ကျသွားသည်။ “ဆောရီး မမ ကျွန်တော် ပြန်ကောက်ပေးမယ် ငွေတော့ မယူပါရစေနဲ့ ” “မမ မင်းကို ကိုယ့်မောင်လေးအရင်းတစ်ယောက်လို ချစ်လို့ခင်လို့ပေးတယ်မှတ်ပါ များများမယူလည်း ငွေတစ်သိန်းလောက်တော့ဖြင့် ယူသွား မင်းသုံးဖို့ပေါ့ ” မမနီနီမြင့်က ထူးကျော် ပုဆိုးခါးပုံစထဲကို ငွေစက္ကူ တစ်သိန်းကျပ်တိတိ(ငါးထောင်တန် တစ်အုပ်)ကို အတင်းအကြပ်ပင် ထိုးထည့်ပေးသည်။
မယူဘူးလုပ်ကာ ရုန်းကန်ရင်း ထိုင်ရာက ထအပြေးမှာ ထူးကျော်ပုဆိုးက မထင်မှတ်ဘဲ ကွင်းလုံပုံကျွတ်ကျသွားရာ အောက်ခံဘောင်းဘီလည်း ဝတ်လေ့ဝတ်ထမရှိတာမို့ ထူးကျော် လီးတန်းလန်းနှင့် ဖြစ်ကာသွားရတော့သည်။ “အိုးးး မ … မမ ” “ဟင် …မောင် မောင်လေး … ခိခိ ခိ ” ဒေါ်နီနီမြင့်ရော သူပါ ကြက်သေသေပြီး ထူးကျော်လည်း ကြောင်တက်တက်နှင့် ဒီအတိုင်းရပ်နေမိခိုက်ဝယ် ဒေါ်နီနီမြင့်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့စံချိန်မီဖြစ်သော တုတ်တုတ်ထွားထွားအလျှားရှည်ရှည် ငပဲကြီးအား အနီးကပ်အနေအထားအတိုင်း ဝဝလင်လင်ကြီး တွေ့မြင်ရွုစားခွင့်ကို ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထူးကျော် တစ်ဖက်လှည့်၍ ပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာလည်း ပြုံးစိစိကြီးဖြစ်နေပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်သူ့လီးကို မြင်တွေ့သွားသဖြင့် မရှက်သည့်အပြင် ပိုလို့တောင်မှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေမိပါသေးသည်။ “မမ ပိုက်ဆံ ပြန်ယူနော် မယူရင် မမလိုပဲ ကျွန်တော်အတင်းထည့်ပေးမှာ ”
“ထည့်လေ ဘယ်နေရာထည့်မှာလဲ ခိခိ ခိ …မင်းက လူနံပိန်သလောက် ဟင်း ဟင်း လူနဲ့တောင်မလိုက်ဘူး မမ ထင်တောင်မထင်ထားမိဘူး ” ဒေါ်နီနီမြင့်လည်း ထူးကျော်မနေတတ်အောင် စနောက်၍ပြောလိုက်ရာ … “အာ မမကလည်း ပေါက်ကရ ပြောတော့မယ် ဟင်းဟင်း ကဲ ဒီမှာရော့ မမ ပိုက်ဆံတွေ ပြန်ယူ ” “အို အို အိုးးး မ မလုပ်နဲ့ မောင် …လေး အာ …ပြန်ယူကွာ ဒုက္ခပါပဲဟယ် ဒီကလေး ” ဒေါ်နီနီမြင့်ကိုယ်ကလေးတွန့် ၍ ရုန်းသည်။ ထူးကျော်က သူမအကျ င်္ီရင်ဘတ်ကြားထဲကို ငွေစက္ကူတွေ အထပ်လိုက်ကို လုံးထွေးပြီး ပြန်ထိုးထည့်ပေးနေသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်ရင်ဘတ်ကြားထဲ သူ့လက်က တိုးဝင်သွားချိန်ဝယ် တင်းမာလုံးခဲ၍ အိအိကလေးဖြစ်နေသော နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို သူ့လက်က တိုက်ရိုက်ပင် ထိတွေ့မိသွားပြီး ထူးကျော်လည်း မသိဟန်ပြု၍ နို့ကို ဖျစ်နယ်ညှစ်ကိုင်ပစ်လိုက်ပါသည်။ သူမကလည်း မခေလှပါ။ ရင်ဘတ်ကြားထဲက ပိုက်ဆံကို မရမက ပြန်လုယူကာ ထူးကျော်ခါးကြားထဲကို ပြန်ထည့်သည်။
နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင် တွန်းရုန်း၍ ထူးကျော်လက်က သူမရင်ဘတ်ကြားက ပြန်ထွက်မလာသေးသလို ဒေါ်နီနီမြင့်လက်ကလည်း သူ့ပုဆိုးစကို တမင်တကာ ဖြေလျှော့ချွတ်ချ၍ ခါးအောက်ပိုင်း ပေါင်ခွဆုံရှိ သူ့လီးကြီးကို မတော်တဆလိုလိုပုံစံနှင့် တမင်တကာပင် ဖျစ်ကိုင်ဆုပ်ဆွဲပစ်လိုက်ပါသည်။ “အား မမ လွတ် လွတ် ပါ ” “မ လွတ်ဘူး မင်းကျတော့ မလွတ်ဘဲနဲ့များ ဟွင်း လာစမ်း ပိုက်ဆံမယူချင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေး သိမယ် ” “အ အား ယူ ယူမယ် ယူပါ့မယ် နာ နာတယ်မမရဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကြီး ဆောင့်မဆွဲနဲ့လေ ” “ဘာလဲ ပြတ်ထွက်သွားမှာစိုးလို့လား ဟွန်း ” “ဟုတ်ဘူး မမရယ် လ လ လီး … တောင် တောင်လာရင် ခက်မှာ ဟင်းဟင်း ဟင်း ” “အမယ်လေ့လေး လီးတောင် တာများ … နီနီမြင့်တို့က အံတိုနေပြီ ” “မမ ကြည့်ချင်လို့ လား ” “…… …… ” နီနီမြင့် ဘာမျှပြန်မပြော အင်းမလုပ် အဲမလုပ်လုပ်နေသည်။ ထူးကျော် မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်သည်။ သူ့လီးက သူပြောသလိုပင် မတ်မတ်တောင်ချင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုင်းခရမ်းသီးကြီးနှယ် ရှည်လမျောကြီးဖြစ်ကာ တွဲလောင်းကျနေသောလီးချောင်းတွဲတွဲကြီးက ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ဖြစ်သော သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ် မလိုက်ဖက်လှဘဲ ဖြစ်နေပေသည်။
“နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး ဟွန်း ” နီနီမြင့် ပါးစပ်မှ သူ့ဖာသာသူ ရေရွတ်သလို အသံကလေးထွက်လာသည်။ သူမမျက်လုံးအစုံကတော့ ထူးကျော်လချောင်းတုတ်တုတ် တွဲတွဲကြီးကို တအံ့တသြငေးမောကြည့်နေပေသည်။ “မမ ငွေကို မလိုချင်ပါဘူး ကျွန်တော် မမ ကို ခင်လွန်းလို့ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ ပြပေးတာနော် ” “ငွေမလိုချင် မင်းက ဘာလိုချင်လို့တုန်း” ပြောပြီးမှ သူမစကားလွန်မှန်းသိ၍ ပြန်ဖာထေးရှာပါသည်။ “မင်း မမကို အထင်တော့ မသေးရဘူးနော် ထူးကျော် ” “အို မမကလည်း ဒါ အထင်သေးစရာလား လို့ အထင်မသေးတဲ့အပြင် အထင်ကြီးလို့ ချစ်လို့ ” ထူးကျော်ပြောပြီး သူမကိုဆက်ပြီး စကားနာထိုးမနေတော့ဘဲ သူမခါးလေးကို သိမ်းကျုံးပွေ့ဖက်ပစ်လိုက်သည်။ ရင်သားအုံအိအိကြီးနှစ်မြွာကို လက်တစ်ဖက်က ဖျစ်နယ်ပစ်လိုက်ရင်း ကျန်တစ်ဖက်က ဖင်သားအိအိကြီး နှစ်ဖက်ကြားထဲကို လက်လျှို၍ နှိုက်သွင်းလိုက်ကာ ဖင်အကွဲကြောင်းအတိုင်း အောက်ကနေအထက်ကို ပွတ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ထမီအောက်နားစကလေးကိုပါ တစ်လက်စတည်းဆွဲလှန်တင်လိုက်ပါသည်။
“အိုးး မင်းးး မင်းးးး … သိပ် ရမ်းကားတာပဲ ထူးကျော်ရယ် … ဟင်းးး … ” ဒေါ်နီနီမြင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှက်စိတ်ဖြင့် နီရဲတွတ်လို့ သွားသည်။ သူမလက်က ထမီကိုပြန်လည် ဖုံးဖိသော်လည်း မရတော့ပေ။ ထူးကျော်က သူမထက်ကို အရင်လက်ဦးနေပြီ။ အသံမထွက်ဘဲ ကိုယ်ကလေးကို တွန့်လိမ်ရုန်းကန်နေရင်းက နီနီမြင့်လက်တစ်ဖက်က သူ့လီးကြီးရှိရာဆီကို မရည်ရွယ်ဘဲ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရပြန်လေသည်။ “မ မမ ” “မောင်လေး ဟင့် ဟင့် အို သိပ်မဆိုးနဲ့ကွယ် ” သူမ အသံက တိမ်ဝင်နေသလို အားအင်ဖျော့တော့လွန်းနေပေသည်။ ထူးကျော်၏လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်မွုက ဒီနေရာမှာ ထိရောက်မွုရှိလွန်းလှပေသည်။ အမျိုးသမီးကြီး၏စောက်ပတ်ကို လက်ဖဝါးကြမ်းကြီးဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ပွတ်သပ်ပစ်လိုက်ကာ ထူထပ်သောအမွေးအမြှင်အုံကြီးကို အပေါ်သပ်တင်လိုက်ပြီး သူမစောက်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်းများထိုးသိပ်ထည့်၍ စောက်စိကလေးကိုရော စောက်ပတ်အုံကြီး တစ်ခုလုံးကိုပါ အပေါ်ကြွတက်လာအောင် တဇပ်ဇပ်ထိုးနှိုက်ဆောင့်သွင်းပေးလိုက်လေသည်။ “အ အ … မောင် မောင်လေး … မ … မလုပ် အ …အား ”နီနီမြင့်တစ်ယောက် ဒူးညွတ်ကာ ပျော့ကျသွားရှာပါသည်။ သူမလက်က ဆုပ်ဆွဲကာ ကိုင်ထားသော ထူးကျော်လီးလည်း လက်ထဲကနေ ပြုတ်ကျွတ်၍ သွားရလေသည်။ ထူးကျော် သူမကိုယ်ပေါ်ကို ဖိမှောက်၍ အိပ်ချလိုက်သည်။
အပေါ်ပိုင်းရှိဘလောက်စ်အကျ င်္ီအပါးလေးကို ဆွဲလှန်၍ ဘော်လီဝတ်ဆင်မထားသည့် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲအသံထွက်အောင် စို့ပစ်လိုက်သည်။ သူမခါးမှ ထမီကို ကွင်းလုံးကျွတ်ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်ဝေးရာဆီကိုရောက်အောင် တစ်လက်စတည်း ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ သည့်နောက်မှာတော့ သူ၏အဆင်သင့် တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော လီးကြီးကို ဒေါ်နီနီမြင့်စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း၏အောက်ဖက်ရှိ စောက်ခေါင်းပေါက်ကျဉ်းကလေးထဲသို့ တစ်ဆုံးမြုပ်သည်အထိ ဝင်ရောက်သွားအောင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့်မနားတမ်း လိုးဆောင့်ပစ်လိုက် လေတော့သည်။ “ဇွတ် ဗြွတ် … ဗြိ စွပ် … ဇွပ် ” “အ အမေ့ အီး … အင့် အင့် ဟင့် မောင် မောင်ထူး ကျော် … သေ သေပါပြီ… တကတည်း လူကို အသေလိုးတာပဲ အိ အီး ဟီး … အီး … ” “စွတ် … ဖွပ် ဘုတ် … စွိ ဇွပ် ဘွတ် … ဗွပ် … ဗလပ် ဘုတ်… ဖတ် ဘတ် … ဗြိ ပြွတ် ဗြွတ် … ” “အိ အီး … အီးယာ့ … အ အလာ့… လာ့ …လားးး နာ နာတယ် အရှီး ကျွတ် …သေ ပီ အိ အီးအီး ” လူငယ်သလောက် အားအင်ကြီးမားသန်စွမ်းမွုက ဒေါ်နီနီမြင့်ကို ရုတ်ခြည်းအငိုက်မိသွားခဲ့စေပြီ။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း လီးနှင့်ပက်ပက်စက်စက် အလိုးမခံရတာကြာပြီဖြစ်၍ ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်၏ လီးနှင့်အတွေ့မှာ မလူးသာမလွန့်သာ မရုန်းဖယ်သာဘဲဖြစ်ခဲ့ရပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အလိုက်ခံလိုက်ရသလို တုန်တခိုက်ခိုက်နှင့် မိန်းမူးသာယာနေမိရာက ထူးကျော်ပင့်မြှောက်ဆောင့်လိုးချက်များအတိုင်း အောက်ကနေ သူမစောက်ပတ်တစ်ခုလုံးကို ကော့ကာကြွကာနှင့်အလိုက်သင့်ပင် ခံညှောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေမိပါသည်။ လိုးချက်က ကြမ်းသည်။ သွက်သည်။ မီးပွင့်မတတ်လည်း ထိချက်က ပြင်းထန်လွန်းနေပေသည်။ နီနီမြင့် စိတ်ရိုင်းဝင်ပြီး … “လိုး လိုးစမ်း ငါ့မောင် မင်းဒီလောက် ငါ့စောက်ပတ်လိုးချင်နေရင်လည်း ကွဲပြဲသွားအောင်သာ လိုးလိုက်စမ်းပါ ထူးကျော်ရာ ” “မမကို ကျွန်တော် စော်ကားမိသလိုဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် မမရယ် ” “မတောင်းပန်နဲ့ မင်း ငါ့ကို ဘယ်ကတည်းက လိုးဖို့ကြံစည်နေသလဲ မှန်မှန်ပြောစမ်း မညာနဲ့ ထူးကျော် ” “မမကို လိုးချင်နေတာကြာပြီ လိုးခွင့်ရတာနဲ့ လိုးဖို့ စိတ်ကူးထားပြီးသားပဲ ” “အေး အဲဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ မင်းလိုးချင်လို့ ငါအလိုးခံပေးမယ် လိုးချင်သလောက် ဘယ်နှစ်ချီလိုးလိုး ရတယ် စကားတော့မဖွာနဲ့ ကြားလား ထူးကျော် …ငါ့စကားနားမထောင်ရင် မင်းနဲ့ငါ သေခန်းပြတ်ပဲ ”
“မမရယ် ကျွန်တော် ခုလိုဖြစ်တာ မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တာ ကျွန်တော် မမဂုဏ်ငယ်အောင် ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး ယုံပါ ” “အေး မင်းစကားနဲ့မင်းပဲ ကဲပါ လိုးတာ ဒီလောက်ကြာနေပြီ ငါ့အရည်တွေလည်း ထွက်ကုန်တာ မနည်းတော့ဘူး မင်းမပြီးသေးတာ အံ့သြတယ် တကယ်ပဲ ” “ကျွန်တော် ခုလို အခွင့်ရတုန်း နှစ်ချီဆက်လိုးချင်တယ် မမ ခွင့်ပြုပါနော် ” “ဟင်း မောင်လေးရယ် ” နီနီမြင့် ဘာစိတ်ပေါက်တယ်မသိ မချင့်မရဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီး ထူးကျော်ကျောပြင်ကို ခပ်တင်းတင်းကြီး ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ရာက … “လိုးမှာဖြင့် လိုးစမ်းပါ ကိုယ်တော်ရယ် မမ ခုလို အလိုးမခံရတာလည်း ကြာနေပြီ ဒါလေးတောင် မင်း မသိဘူးလား ဟင် ” အားမလိုအားမရ ပြောလိုက်မိရင်း သူမစောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ဝင်ထွက်နေသောလီးကြီးကို တင်ပါးကြီးပင့်မြှောက်ကော့ဝိုက်ကာဖြင့် အောက်ကနေ အဆက်မပြတ်ညှောင့်၍ ညှောင့်၍ ပေးနေမိလေတော့၏။ ထူးကျော်လည်း ဒေါ်နီနီမြင့်ဖင်သားအိအိကားကားကြီးနှစ်ဖက်ကို အားပါးတရ အောက်ကနေပင့်မကိုင်ကာ ဆုပ်ဆွဲရင်း ဇယ်ဆက်သလို လိုးပေးလိုက်သည်။ အချက်နှစ်ဆယ်အစိတ်မက အချက်လေးငါးဆယ် နာရီဝက်နီးပါးလောက် ကြာအောင် အပီအပြင် ထင်တိုင်းကြဲ၍ လိုးပစ်လိုက်ရင်း သူ့လီးထိပ်မှ ကျင်ကနဲကျင်ကနဲ ဖြစ်လာပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သော လရည်ပျစ်ချွဲချွဲများကို ဒေါ်နီနီုမြင့်၏ စောက်ခေါင်းလေးထဲမှတစ်ဆင့် သူမသားအိမ်ထဲသို့ အဆက်မပြတ်ပင် ပန်းလွတ်ထုတ်ပစ်လိုက်လေသည်။
ဒေါ်နီနီမြင့်လည်း ငိုချင်ရက်လက်တို့ ဆိုသလိုပင် ထူးကျော်ပြီးလျှင်ပြီးချင်းပင် သူမစောက်ပတ်ဆီမှ စောက်ရည်များ ရေကာတာမှရေလွတ်လိုက်သကဲ့သို့ တဖြောဖြော ပန်းထွက်လာရပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ရလေတော့၏။ နှစ်ယောက်သား မောမောနှင့်စကားမပြောနိုင်ကြသေးဘဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖက်ကာ ထပ်မှောက်လဲလျှောင်းနေမိကြ၏။ ထူးကျော်က သူမနွုတ်ခမ်းလေးများကို အသာအယာပင် စုပ်ဆွဲနမ်းလိုက်ရာ သူမဆီမှ ချက်ချင်းပင် တုံ့ပြန်နမ်းစုပ်ပေးလာပါသည်။ နွုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ရုံမက လျှာချင်းလည်း ယှက်လိမ်ဆွဲကာ ခလုတ်တိုက်မိကြသည်။ အောက်နွုတ်ခမ်း အပေါ်နွုတ်ခမ်း တစ်လှည့်စီ အနမ်းပေးရင်း ထူးကျော်လက်နှစ်ဖက်က ဒေါ်နီနီမြင့်၏ ရင်သားအိအိကြီးနှစ်မြွာကို စတင် လူးလှိမ့်ဖျစ်ကိုင်ပေးလာသည်။ နို့သီးခေါင်း လုံးချွန်ချွန် ကလေးနှစ်ခုကို လှိမ့်နယ်ဖျစ်ချေကစားရင်း နို့တစ်ဖက်စီကို စို့ပေးလိုက်ရာ ဒေါ်နီနီမြင့်နွုတ်ဖျားဆီမှ တအင်းအင်း တဟင်းဟင်းနှင့် ငှက်ဖျားတက်သလို ညည်းသံကလေးများ စတင် ထွက်ပေါ်လာရတော့သည်။
“အိုး မောင်ရယ် ကောင်းလှချည်လားကွယ် ဘယ်တုန်းကများ ဒီအတတ်တွေကို တတ်နေပါလိမ့်နော် ” “မမကို ချစ်လွန်းလို့ပါ မမရယ် ” “မင်း တကယ်ပြောနေတာလား လမ်းကြုံတုန်း အပျော်ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးလား” “မမ ယုံကြည်အာင် ဘယ်လို သက်သေပြရမလဲ ” “ချစ်ပေး ခုနကလို အမုန်းထပ်ဆွဲပေးဦး မမ မင်း အဲဒီလိုလုပ်ပေးတာကို သိပ်ကြိုက်တယ် ” “တကယ်နော် မမ ဟိုဖက်လှည့်ပေးပါ မမဖင်ကြီးကို ကြည့်ချင်တယ် ဖင်ကြည့်ရင်း လီးတောင်ချင်တာ မမစောက်ပတ်ကိုလည်း အားရပါးရမွုတ်ပေးချင်သေးတယ် ” “မောင်လေး မောင်ထူး မမပြောပြီးပြီပဲ မဟုတ်လား မင်းသဘောအတိုင်းပါ လို့ ” မမနီနီမြင့်က ကိုယ်ကို တစ်ဖက်သို့ လှည့်ကာ လှဲအိပ်ပေးလိုက်သည်။ သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ကားကားကြီးလုပ်ပေးထားသည့်အတွက် အနောက်ကကြည့်နေသူ ထူးကျော်အဖို့ သူမဖင်အိအိကြီးတွေကို တစိမ့်စိမ့်အရသာခံကြည့်ရွုရင်း ဖီလင်တွေ တဖြည်းဖြည်းတက်လာရလေသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် လီးက ပျော့ခွေနေရာက တမုဟုတ်ချင်းပင် ပြန်လည်တောင်မတ်လာရပေသည်။ ထူးကျော် သူမဖင်ကို ကြည့်ရင်း သူ့လီးကို လက်နှင့်ဂွင်းရိုက်၍နေသည်။ သူမဖင်နှစ်ဖက်ကို လက်နှင့်ထပ်မံ၍ ပြဲပြဲကားကားလုပ်ပေးလိုက်ရင်း ဖင်စအိုပေါက်ကလေးထဲကို လက်တံတွေးဆွတ်၍ ထည့်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ချောင်းပူး ထိုးထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်၍ နီနီမြင့် ဖင်တွန့်တက်သွားမိပါသည်။ ထူးကျော် သူမဖင်ကိုနမ်းသည်။ မက်မက်စက်စက် နမ်းပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖင်ပေါက်ကိုပါ လျှာနှင့်ယက်၍ ထိုမှတစ်ဆင့် အောက်ကို လျှောဆင်းသွားလိုက်ကာ စောက်ဖုတ်ပြူတစ်တစ်ကလေးကိုပါ ပါးစပ်နှင့် ပြွတ်ပြွတ်ဆိုပြီး ဆက်လက် နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်ပြန်လေသည်။ “မမ ဒီဖက်ပြန်လှည့် ” “အင်း မောင်လေး ” နီနီမြင့် သူပြောသမျှကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာနေသည်။ ကိုယ်ကို တစ်ပတ်ပြန်လှည့်လိုက်တော့ သူမစောက်ပတ်ကို ထူးကျော်မျက်နှာအရှေ့မှာ တမင်တကာ ဖြဲပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ ဒီအချိန်ကျမှ ထူးကျော်လည်း သူမစောက်ပတ်ကို ကုန်းပြီးနမ်းလိုက်တော့သည်။
ထူးကျော်မှာ ငယ်စဉ်လူပျိုပေါက်စ အရွယ်လောက်ကတည်းက မမကြီးများ၏အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ဘာဂျာမွုတ်သည့်အလုပ်ကို ရွယ်တူယောက်ျားလေးတွေထက် ပိုပြီး လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဘာဂျာအလွန်ကောင်းသည်ဟု မမတွေအကြားမှာ အထူးတလည် ရေပန်းစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စောက်ပတ်နွုတ်ခမ်းသား ထူအိအိတွေကို တအားစုပ်ဆွဲနမ်းရင်း အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း အောက်မှနေ၍ အထက်သို့ လျှာပြားကြီးဖြင့် တစ်ချက်နှစ်ချက် ပင့်ယက်သပ်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းရဲ့ အောက်ဖက်က လိုဏ်နန်းဝကလေးထဲကို လျှာကိုလိမ့်သွင်းပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ နီနီမြင့်စောက်ပတ်က သူ့အပြုအစု အယုအယကြောင့်ထင်သည်။ အရည်တွေစိုရွဲ၍ ထွက်လာပါသည်။ ထူးကျော်အရည်တစ်စက်မျှ မကျန်အောင် စုပ်ပစ်လိုက်သည်။ “ကောင်းလားဟင် မမ ” “ကောင်း ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် မမ တစ်ချီတောင် ပြီးချင်တယ် ယက် ယက် မောင်လေး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလျှာနဲ့ယက်ပေး မမစောက်ပတ် တအားရွလွန်းနေပြီ” လျှာနှင့်ယက်ရုံတောင်မဟုတ်ဘဲ စောက်ခေါင်းထဲကိုလည်း လက်နှစ်ချောင်းပူးထည့်၍ လိုးပေးလိုက်သေးသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်ခမျာ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်ရှာတော့ပြီ။
တစ်ကိုယ်လုံးကော့ကြွကာ ထွန့်ထွန့်လူးရင်းက သူမစောက်ပတ်တဝိုက်မှာလည်း စောက်ရည်ဗရပွ စီးယိုထွက်ကျလာခဲ့ရကာ သူမလက်နှစ်ဖက်က သူ့ခေါင်းကို ရုတ်တရက်ကြီး တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်ပြီး … “တော်ပြီ မောင်လေး မင်းလီးကို မမတစ်လှည့်စုပ်ပေးမယ် မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် လိုးကြရအောင်ကွယ် မမ မနေနိုင်တော့ဘူး ” “ဒါဖြင့် စုပ်လေ မမရဲ့ ” ထူးကျော် သူ့လီးကြီးကို နီနီမြင့်ပါးစပ်နားတိုးကပ်ပေးလိုက်ပြီး လီးစုပ်စေလိုက်သည်။ နီနီမြင့်၏ လီးစုပ်ပညာကလည်း မခေလှပေ။ ထူးကျော်လိုလူကို ကော့ပျံသွားလောက်အောင်ပင် စွမ်းလွန်းလှသည်။ လီးဒစ်ထိပ်လုံးကို ငုံကာစုပ်၍ လီးကိုယ်ထည်တစ်လျှောက်အား လျှာဖြင့်ယက်လိုက်ဆွလိုက်လုပ်ပေးသည်။ ထူးကျော်လီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ လီးတစ်ချောင်းလုံး အာခေါင်တွင်းသို့ မဝင်ဝင်အောင်သွင်းပြီး ခေါင်းကိုနှိမ့်လိုက်ကြွလိုက်လုပ်၍ ပါးစပ်နှင့်လိုးပေးသည်။ လချောင်းကိုရော ဂွေးဥနှစ်လုံးကိုပါ ပါးစပ်နှင့်တပြွတ်ပြွတ်စုပ်၍ လျှာနှင့်မရပ်မနား ဆွနွူးပေးလိုက်လေရာ ထူးကျော်လည်း လီးတောင်လွန်လွန်း၍ နီနီမြင့်ပါးစပ်ထဲမှာတောင် သူ့လီးကမဆန့်ဘဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရလေသည်။ ထူးကျော်လီးကြီးက အဆမတန်ကြီးထွားလာသည်။
“လိုးကြစို့ မမရယ် နော် ” သူ့အပြောကိုပင် နီနီမြင့်တစ်ယောက်စောင့်နေပုံရသည်။ “မမ ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ ပြော မောင်လေး ” “ကုန်းလိုက် မမ ကျွန်တော် အနောက်ကလိုးပေးမယ် ” ဒေါ်နီနီမြင့် ခြေလက်လေးဘက်ထောက်ပြီး မှောက်ခုံရက် ဖင်ကို ကုန်းပေးလိုက်သည်။ သူမဖင်ကြီးမှာ အယ်အယ်ထွားထွားကြီးဖြစ်ရာ အသားအရေဖြူဝင်းသလောက် ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးဖြစ်လျှက် ခါးလေးကိုအနည်းငယ်ကွေးညွတ်ပြီး ဖင်ကို ယောက်ျားလေးအကြိုက် ထင်သလို လိုးနိုင်အောင် အလိုက်တသိ ကော့ထောင်ပေးထားသည့်အနေအထားနှင့်မို့ ထူးကျော်လည်း လိုးချင်စိတ်ကို ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ထိန်းချုပ်မထားနိုင်တော့ပါချေ။ နီနီမြင့်ဖင်သားကားကားကြီးအား ကုန်းနမ်းပစ်လိုက်ရာက ဖင်နှစ်ဖက်ကို ခပ်ကော့ကော့လေး စိတ်တိုင်းကျပြုပြင်၍ သူမဖင်သားအနောက်ကနေပြီး ပြူးပြဲထွက်နေသည့် စောက်ပတ်ကြီးထဲကို သူ့လီးထိပ်အားထည့်သွင်းပြီး ဖွပ် ဇွပ်ဆိုပြီး အနောက်ကနေ ခပ်ဆတ်ဆတ်ကလေးလုပ်ကာ ဆောင့်လိုးချလိုက်လေသည်။ လီးကြီးက တစ်ဝက်သာသာလောက်နစ်ဝင်သွားပြီး နီနီမြင့်ဖင်ကြီး အပေါ်ကိုငေါ့ထောင်ကာ ကောက်တက်သွားရလေသည်။
ထူးကျော်အပီအပြင်ကျုံးလိုးသည်။ သူမကလည်း ဖင်နောက်ပြန်တွနါး၍ ညှောင့်ဆောင့်ပေးနေသည်။ သူ့လီးကြီးလွန်းလှ၍ ခံရချက်ကတော့ မသက်သာလှပေ။ နီနီမြင့်မျက်နှာလေး ဣနြေ္ဒမဆယ်နိုင်လောက်အောင် ရွုံ့မဲ့နေရပြီး အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့်ပင် ထူးကျော်လိုးသမျှကုန်းရုန်းခံနေကာ လီးအရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားနေလျှက်ရှိပေသည်။ “မမ အကြိုက်တွေ့ရဲ့လား ” “ကြိုက်ပါတယ် ငါ့မောင်ရယ် ဒါပေမယ့် မင်းလီးကြီးက မမရဲ့သေသွားတဲ့လင်ထက်တောင် နှစ်ဆလောက် ကြီးမားနေသေးတယ် မမ ဒီလို တစ်ခါမှ အလိုးမခံဖူးပါဘူးကွယ် မင်းလိုးတာ မမ အသည်းတွေအူတွေတောင် ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တယ် မသိတော့ပါဘူး ” “မမ သားအိမ်ထောက်မိလို့လား ဒါဖြင့် ရိုးရိုးပဲလိုးရအောင်လေ နောက်ကျင့်သားးရတော့မှ ဖင်ထောင်လိုးတာပေါ့ မမကို ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး လိုးပေးမယ် ကျေနပ်လား ဟင် မမ” “ကျေနပ်ပါတယ် မောင်လေးရယ် ဟုတ်တယ် မင်းပြောသလိုပဲ ခုနကအတိုင်းပြန်လိုးရအောင် စောစောက အနောက်ကနေလိုးတာ မင်းဟာကြီးက သားအိမ်လားဘာလား တစ်ခုခုထောက်မိနေသလိုပဲ မမ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် ” “ရတယ် ကျွန်တော် လီးချွတ်လိုက်မယ် မမ ပက်လက်လှန်လိုက်နော် ” နှစ်ယောက်သားပုံစံပြန်ပြောင်းပြီး လှေကြီးထိုးအတိုင်း လိုးပေးလိုက်ရသည်။
နီနီမြင့်က ဒီပုံစံကြိုက်သလို ထူးကျော်လည်းကြိုက်သည်ပင်။ သူမနို့ကိုစို့၍ စိတ်ရှိလက်ရှိ ကိုယ်လိုသလို ဆွဲလိုးလို့လည်းရနေပေသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စတွေ့ကာ ချစ်မဝနိုင်သေးချိန်မှာ ဒီနည်းအတိုင်း ဖက်ရမ်းနမ်းရွုံ့၍ အချိန်ယူ လိုးရတာလည်း တစ်မျိုး အရသာရှိတာအမှန်ပဲဖြစ်သည်။ သူမဖင်ကြီးကို အိုးပင့်မပြီး ထူးကျော် ပက်ပက်စက်စက် စခန်းသွားပစ်လိုက်သည်။ သူ့လီးကို တစ်ဆုံးထည့်လိုးလိုက်တာမို့ ထိထိမိမိအရသာလည်းရှိပြီး အိကနဲအင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကာ နီနီမြင့်သူ့ရင်ဘတ်ကိုပင် အလန့်တကြားတွန်းကန်ထားလိုက်မိပါသေးသည်။ ကြီးလည်းကြီး ရှည်လည်းရှည်သောလီးမို့ နီနီမြင့်တစ်ယောက် သူ့ကို လက်မလွတ်ချင်လောက်အောင် အချစ်ပိုသွားမိပါသည်။ ထူးကျော်က အသက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်၍လိုးအားဆောင့်အားလည်းကောင်းသည်။ မိန်းမအကြိုက် အကြမ်းတစ်မျိုးအချောတစ်ဖုံ အမျိုးမျိုးလိုးပေးနိုင်ပြီး သူမစောက်ပတ်အတွင်းနံရံတွေကို သူ့လီးကြီး အပြည့်အသိပ် ထည့်သွင်းပွတ်တိုက်မွုပေးနေတာမို့ ဒေါ်နီနီမြင့်တစ်ယောက်ကော့ပျံနေအောင်အလိုးခံနေရကာ ပါးစပ်ကလည်း တကျွတ်ကျွတ် အိုးအိုးအင့်အင့် အသံစုံမြည်တမ်းညည်းညူရင်း ထူးကျော်ခါးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်တွယ်၍ ကာမစည်းစိမ်အတွေ့ကြီးတွေ့နေမိလေတော့သည်……. ပြီးပါပြီ။